Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2010 September 01
01 Septambra 2010
Tantara tamin'ny 01 Septambra 2010
Karaiba: Fanarahana an'i “Earl”
Tonga indray ilay fotoana: vanim-potoanan'ny tafio-drivotra. Ka ireo mpitoraka blaogy any amin'ny faritra, voadona tamin'ireo tafio-drivotra mahery be taloha, dia manara-maso akaiky ny tafio-drivotra Earl, izay nosokajiana ho tafio-drivotra sokajy faha-3. Mandritra ireo 36 hatramin'ny 48 ora ho avy dia eritreretina handalo anyamin'ireo nosy Virjinia Amerikana sy Porto Rico izy,...
Shina: Niakatra ny harin-karena, ary ny fandaniambola?
Tsy mitsahatra ny maheno isika hoe mitombo hatrany ny toe-karen'ny Sina; nitombo tsikelikely ve ny fandanian'ny vahoaka? Mijanona any amin'ny banky ny tahirin'ny tsirairay avy, hoy ny mpitoraka blaogy iray: manomboka any amin'ny toeram-pitsaboana ka hatrany an-tsekoly sy any amin'ny toerana natokana ho an'ireo be antitra dia tsy afaka mifaninana...